Yize isimo somuntu sigcotshwa uNkulunkulu - lokhu akuphikiseki futhi kungathathwa njengento enhle - siguqulwe uSathane. Ngakho sonke isimo somuntu siyisimo sikaSathane. Umuntu angathi uNkulunkulu, ngokwesimo, uqondile ekwenzeni izinto, futhi naye uziphatha ngale ndlela; naye unalolu hlobo lwesimo, futhi uthi isimo sakhe simele uNkulunkulu. Ngabe uhlobo luni lomuntu lolu? Ngabe isimo sobusathane senkohlakalo singakwazi ukumela uNkulunkulu? Noma ubani othi isimo sakhe simele uNkulunkulu uhlambalaza uNkulunkulu, futhi uthuka uMoya oNgcwele! Uma kubhekwa indlela uMoya oNgcwele asebenza ngayo, umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni ngowokunqoba kuphela. Yingakho isimo somuntu esiningi senkohlakalo yobusathane singakahlanzwa, nokuthi kungani lokhu okuphilwa umuntu kusewumfanekiso kaSathane. Yilokho umuntu akholwa ukuthi kulungile futhi kumele izenzo zenyama yomuntu, noma, ukukubeka kuqonde, kumele uSathane futhi ngeke kukwazi nhlobo ukumela uNkulunkulu. Yize noma umuntu evele esemthanda uNkulunkulu kangangokuba ukwazi ukuthokozela impilo yezulu emhlabeni, ukwazi ukwenza izinkulumo ezinjengezithi: “O Nkulunkulu! Angikwazi ukukuthanda ngokwanele," futhi usefinyelele esicongweni, awukwkwazi ukuthi uphila ubuNkulunkulu noma umele uNkulunkulu ngoba ubunjalo bomuntu abufani nobukaNkulunkulu. Umuntu angephile ubuNkulunkulu, njengoba engeke akwazi ukuba wuNkulunkulu. Lokho uMoya oNgcwele aqondise umuntu ukuba akuphile kuhambisana kuphela nalokho uNkulunkulu akufuna kumuntu.
Okulandelayo：Ukukhonza Kwenkolo Kumele Kususwe